Kedu ka eziokwu ga-esi gbasawanye emetụta ahịa Marketing? | Martech Zone
COVID-19 agbanweela otú anyị si azụ ahịa. Site na oke ọrịa na-efe efe n'èzí, ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịnọ na ịzụta ihe n'ịntanetị kama. Ọ bụ ya mere ndị ahịa ji na-atụgharị uche na ndị na-eme ihe ike na ọtụtụ maka vidio na ihe ọ bụla site n'ịgbalị na lipstick na igwu egwuregwu vidio kachasị amasị anyị. Maka ndị ọzọ na mmetụta nke ọrịa ahụ na-emetụta ahịa na ịnye ọnụahịa, lee ọmụmụ ihe anyị na nso nso a.
Ma olee otu ọrụ a maka ihe ndị ahụ nke a ga-ahụrịrị ka a ga-ekwere? Lipzụta lipstick ị tụrụ atụ n'ime ụlọ ahịa bụ ihe dị anya site na ịtụ ya ọhụụ ahụghị. Kedu ka ị si mara etu ọ ga-adị na ihu gị tupu ịzụrụ? Ugbu a enwere ihe ngwọta na ndị na - eme ihe ike na - egosi anyị ụzọ iji nwee obi ụtọ, eziokwu, na ọdịnaya na-atọ ụtọ.
Site ugbu a, anyị niile ahụla mmụba mere eme (AR) n'ụdị ụfọdụ. O nwere ike ịbụ na ị hụlarịrị ndị na - eme ihe nkiri na - ekerịta vidiyo nke onwe ha na - eyi ntị na nkịta dijitalụ, ma ọ bụ afọ na - aza ihu na ihu ha. I nwere ike icheta n’afọ ole na ole gara aga mgbe onye ọ bụla na-eji ekwentị ha na-achụ ndị nwere agwa Pokemon n’obodo niile. Nke ahụ bụ AR. Ọ na-ewe ihe onyonyo mepụtara kọmputa wee tinye ya na ekwentị gị, yabụ ị ga-ahụ Pikachu ka ọ kwụ n’ihu gị, ma ọ bụ gbanwee ụzọ ihu gị dị. AR amaola ama na soshal midia n'ihi uru ntụrụndụ ya. Mana enwere ike karịa n'ime ụwa nke ecommerce. Gịnị ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ na lipstick na ihu gị na-enweghị na-bilie si n'ihe ndina gị? Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnwale ọdịdị dị iche site na nkasi obi na nchekwa nke ụlọ gị, tupu ị rute na kaadị kredit? Na AR, ị nwere ike ime nke ahụ niile na ndị ọzọ.
Ọtụtụ ụdị na-awụli elu na teknụzụ a, nke a na-atụ anya na ọ ga-emewanyewanye. Site na etemeete na ntu na akpụkpọ ụkwụ, ndị na-ere ahịa na-achọta ụzọ ọhụụ ọhụụ iji wepụta teknụzụ a na-akpali akpali. Kama nke ndị mara mma puppy ntị, ị nwere ike na-agbalị na a ọhụrụ ụzọ nke iko ma ọ bụ iri na abụọ. Kama egwurugwu na igwe ojii na-ese n'elu isi gị, ịnwere ike ịnwale agba ntutu ọhụrụ na nha. Nwere ike ịga maka ịgagharị na akpụkpọ ụkwụ sneakers mebere. Na ihe ngosi a na-eto eto karịa oge niile.
Virtual try-ons, dị ka nke a na-akpọ ọhụrụ omume, na-atọ ụtọ na ma eleghị anya, a obere na-eri ahụ maka nkezi n'ji. Ihe ruru nde ndị ọrụ ntanetị mmadụ 50 ga-eji AR na 2020. Yabụ ọrụ dị a canaa ka ndị ntụnye nwere ike ịrụ na ihe a niile? Iji malite, nnwale nke ha ga-erute ọtụtụ narị nde ndị na-eso ụzọ na ejiji na ụlọ ọrụ mara mma, na-akwọ ndị na-azụ ahịa ozugbo gaa ngwa ngwa ọkacha mmasị ha ka ha kpọọ maka onwe ha. Brandsdị ndị na-ejidebeghị AR ka ga-ahụ onwe ha na ọghọm dị ka ndị mmetụta na-eziga ndị na-eso ụzọ ha n'otu n'otu ka ha jiri teknụzụ ọhụụ.
Dika teknụzụ AR na-akawanye mma, ndị na - eme ihe ike agaghịdị enwe ihe uwe iji gosipụta otu ha ga - esi hụ ya, nke pụtara ọdịnaya karịa na ngwa ngwa. Cheedị ohere ọ bụla dị ka ndị na - eme ihe ike na - emekọ ihe ọnụ maka ngosipụta ejiji na - ebi ndụ. Enwere ike ịmepụta nnukwu ihe omume dị n'ịntanetị gburugburu echiche nke otu ndị na-emetụta ihe na-agbalị otu uwe iji gosi etu ha ga-esi apụta n’arụ na nha dị iche iche. A ga-ahazi ya niile na enweghị onye ọ bụla n'ime ha ga-ahapụ ụlọ obibi ya.
Mana ejiji na ejiji mara mma abụghị naanị ojiji maka AR. Dị ka ngwa ọrụ ngosi dị ike, AR bụ azịza maka ndị na-eme ihe ngosi iji gosipụta ngwaahịa ndị ọ dị mkpa ilele site na vidiyo. Nke a nwere ike ịpụta igosipụta etu esi eji ngwaahịa edozi isi, mana ọ nwekwara ike ịgbatị n'ime ala dịka ụlọ ọrụ egwuregwu, dị ka igosi egwuregwu vidio. N'ime ụlọ ọrụ ụlọ, IKEA na-ebupụta ngwa a na-akpọ IKEA Ebe, nke ga-enye ndị ọrụ ohere ịnwale ụdị arịa dị iche iche n'ụlọ ha tupu ha azụta ihe, tinye ya n'ụlọ, ma gaa mbọ itinye ya niile.
Lelee ihe omume ịntanetị nke ndị na - eme ihe ngosi na - egosi gị otu esi eme ya site na ịgagharị n'ụlọ ha ma na - eme ntụli aka maka tebụl ọhụrụ ha ga - etinye n'ime ụlọ iri nri ha. Enwere ọtụtụ ohere maka okike dị ka teknụzụ na-agba eto.
Anyị amaworị na Youtube gbawara na vidiyo site na ndị na-emetụta ya ka ndị na-eso ụzọ na-achọ ụdị ọdịnaya ọhụrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri vidiyo ise na-ekiri kwa ụbọchị na Youtube site na ihe karịrị nde ndị na-ekiri 30. AR bụ ezigbo mmelite na usoro. Ọ bụ mgbasa ozi na-esote. Dịkwa ka ohere maka AR na-agbatị ọbụna karịa ahịa n'ime ngwa nke ụwa dịka agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ, ọgbara ọhụrụ ga-aga n'ihu na-aka mma. Brandsdị ndị na-eme ngwa ngwa na-erite uru na ihe ọ na ahịa ndị ahịa nwere ike imere ha, ọ ga-aka mma.
Iji mụtakwuo banyere mmetụta influencer x AR na otu ọ ga - esi mee ka akara gị nwee ọkwa na - esote, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma onye si na otu anyị ga - eru n'ime awa 24.
A&E bụ ụlọ ọrụ dijitalụ nke nwere nke kachasị Pọtụfoliyo ndị ahịa nke ụlọ ọrụ Fortune 500 dịka Wells Fargo, J&J, P&G, na Netflix. Ndị guzobere anyị, Amra na Elma, bụ ndị na - eme ihe ike karịrị mmadụ abụọ na nde mmadụ abụọ; lee ihe banyere A&E na Forbes, Bloomberg telivishọn, Oge ego, Inc., na Vidiyo onye nyocha azụmahịa.
Tags: a & eAmra na Elmaarkwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuịma mmafashionikea ebeahịa ahịainfluencer gbalịamebere na-agbalịmebere na-anwaleyoutube